देशमा संघीयता घाडो भएको सङ्केत देखिन थाल्यो:डा. डीआर उपाध्याय - राष्ट्रखबर-Nepal's Popular Digital Newspaper
राजनीति देशमा संघीयता घाडो भएको सङ्केत देखिन थाल्यो:डा. डीआर उपाध्याय
हिजो प्रदेश नंं. ५ को संसद बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसदको ध्वंशात्मक र मन्त्रीको अमर्यादित क्रियाकलाप देखापरे । यस्ता कार्य निन्दनिय छन् । यो लाजमर्दो हर्कतले लोकको जग हसाएको छ । यो हर्कतले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको आरोप सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको छ ।
तोडफोड र भाँडभैलोबीच प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामकरण प्रस्तावमाथिको छलफल सोमबार सकिएको छ । यो कार्यशैलीले लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ । प्रदेश ५ को प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा सोमबार नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले कुर्सी तोडफोड गरेका थिए । उनीहरूले प्रदेश सरकारको विरोध गर्दै प्रदेश मन्त्रीलाई प्रस्ताव पेश गर्न रोष्ट्रम जाने क्रममा अवरोध प्रयाससमेत गरेका थिए । यतिबेला सवैतिर कांग्रेस सांसदको हर्कतको चौतर्फी आलोचना भएको छ । कांग्रेसका प्रदेश ५ का सांसदले कुर्सी टेबलमा बजार्ने, रोष्टमतिर फाल्ने र माइक पनि तोडफोड गरेको दृश्य भिडियोमा देखिन्थ्यो ।
प्रदेश ५ सरकारले शुक्रबार प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा राख्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश ५ का सांसदहरु छलफलबिनै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै आक्रोशित भएका हुन् । यसको बिरोधमा प्रदेश ५ मा सडकसमेत तातेको छ । गाडीमा तोडफोड भएको छ । बाटोमा टायर बालिएको छ । नारा जुलुश गरिएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई गाली गरिएको छ । सरकार के गाउँ गाउँमा सिहदरबार भनेको यहि हो ? नेपाली जनताले आफनो पसिनाबाट तिरेको करबाट खरिद गरिएको सरकारी सम्पत्तिको तोडफोड गर्नेलाई के कार्बाही हुन्छ सरकार ? यस्ता नेता भएका हाम्रो देशका जनताले उनीहरूबाट के आश गर्ने ?
अब देशमा संघीयता घाडो भएको सङ्केत पो देखिन थाल्यो । सरकार अव बेलैमा विचार गर्ने कि ? कतै संघीयता नै असफलतातर्फ उन्मुख भएको त होइन ? स्वयम् संघीयतानै आफ्नो निरर्थकता सिद्ध गर्ने तर्फ उद्धत भएको घटनाक्रमले देखाउछन् ।